उज्यालो नेपाल – Page2– उज्यालो नेपाल Ujayaalo
Author: उज्यालो नेपाल
महावीर पुन जापानमा सम्मानित
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on महावीर पुन जापानमा सम्मानित
जापान-संचार तथा प्रविधि विज्ञ एबम् अनुसन्धानबिद् डा. महावीर पुन जापानमा सम्मानित भएका छन्। पुनलाई ‘वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन तथा ईन्फर्मेशन सोसाईटी डे’को अवसरमा विहिबार अन्तराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन जापानको आयोजनामा टोकियोमा भएको ग्लोबल समिटमा सम्मान गरिएको हो। पुन नेपालको संचार क्षेत्रमा नयॉ खोज एवं सफलतापूर्वक उपलब्धिहरु हासिल गरेको भन्दै आइटीयु एजे अवार्डद्वारा सम्मानित भएका हुन्। पुन नेपालको ग्रामिण […]
आलुको मूल्य नपाएपछि किसान चिन्तित
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on आलुको मूल्य नपाएपछि किसान चिन्तित
जिल्लाका किसानहरु यस बर्षको आलु उत्पादनबाट उचित मूल्य नपाएपछि चिन्तित भएका छन् । विगतको तुलनामा आलु कम फल्ने र फलेको सिजनमा भाउ नपाउने भएपछि आलु उत्पादक किसानहरु चिन्तित बनेका हुन् । यस बर्ष आलु खन्ने सिजनमा असिना पानी परेका कारणले पनि किसानहरु आलु विग्रन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । पनौती नगरपालिका–९ फिरफिरेका नवराज श्रेष्ठ यसपालिको […]
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on होचो मान्छेले कपडा छान्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
मानिसको व्यक्तित्व झल्काउन उसले प्रयोग गर्ने कपडाको पनि मुख्य भूमिका रहन्छ । मानिस समय र मौसमअनुसारको फेसन गर्न रुचाउँछ । फेसन बजारमा ऊ आफूलाई फेसनप्रति सचेत देखाउन हरसम्भव कोसिस गरिरहेको हुन्छ । यसरी फेसन परिवर्तन गर्दा हामीले हाम्रो शारीरिक बनावट र उचाइलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी उचाइ सानो भएका किशोरी वा […]
खुसी हुने कला जानी राख्नुहोस्
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on खुसी हुने कला जानी राख्नुहोस्
लक्ष्य पूरा गर्न अहोरात्र लाग्दा सधैँ सफलता मिल्दैन । असफल हुँदा बेखुसी हुने आम बानी हुन्छ । त्यसैले त अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोचको चक्करमा फसिरहन्छन् । नकारात्मक सोच मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अब, खुसी हुने कला सिक्नुहोस् : -‘सोचाइ, परिवेश, वातावरणअनुसार सोच्ने तरिका फरक–फरक हुन्छन् । सोचाइअनुसार नै जिन्दगी जिउने बानीको […]
१० वर्षमा नेपाललाई स्वर्ग बनाउन चाहन्छौं : प्रधानमन्त्री
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on १० वर्षमा नेपाललाई स्वर्ग बनाउन चाहन्छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताले विकास र समृद्धिका लागि सुदृढ अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन्। नेकपाको गठनपछि पहिलो बैठक बसेको पार्टीका संघीय संसद्का सदस्यको बैठकलाई अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपसमा कसरी मिल्ने भनेर विश्वलाई सन्देश दिने प्रकारले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता भएकाले अब यसलाई […]
रिमा पनि डिभोर्स गर्ने नायिका
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on रिमा पनि डिभोर्स गर्ने नायिका
आफ्नो पतिसँग डिभोर्स गर्ने नायिकाको सूची लामो छ । सूचीमा थपिएकी छिन् रिमा विश्वकर्मा । दुई वर्षअघि रिमाले भव्य समारोहका बीच बेलायतनिवासी रोबर्ट विश्वकर्मासँग काठमाडौंको हायात होटेलमा बिहे गरेकी थिइन् । बिहेपछि रिमा नेपालमै र रोबर्ट बेलायतमा बस्दै आएका थिए । सम्भवतः टाढा बसेकाले होला दुईबीच आत्मीयता गाढा हुनै पाएन । त्यसैले उनीहरूको सम्बन्ध डिभोर्समा […]
न्यु फेसमा गायिका, तृतीया गुरुङ
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on न्यु फेसमा गायिका, तृतीया गुरुङ
तृतिया गुरुङ नवगायिका हुन् । विगत तीन वर्षदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा नयाँ आवाज लिएर उदाएकी छिन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा बी म्युजिक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत गुरुङ साधना कलाकेन्द्रमा संगीत सिकिरहेको बताउँछिन् । धरानकी तृतीया गुरुङ सानैदेखि गीत–संगीतप्रतिको मोहले म्युजिक क्षेत्रमा लागेको बताउँछिन् ।युट्युबमा दुईवटा गीत र एउटा म्युजिक भिडियो सार्वजानिक गरेपछि राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि झनै हौसिएको […]
अभिनयबाहेक केही छैन : स्वस्तिमा खड्का, अभिनेत्री
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on अभिनयबाहेक केही छैन : स्वस्तिमा खड्का, अभिनेत्री
आर्टिटेक्चर इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश भयो । मलाई त्यतिवेला आर्टिटेक्चर नै बन्छु भन्ने लागेको थियो । तर, जब अभिनय सुरु गरेँ, त्यसपछि यही क्षेत्रमै फोकस्ड छु । ठोस योजना बनाएर पनि अघि बढेको होइन । तर, अहिले मेरो दिमागमा अभिनयबाहेक अरू केही छैन । यस क्षेत्रमा लागेको ३ वर्षजति भयो । छोटो समयमा जे– जति उपलब्धि हात पारेको छु । […]
पार्टी एकताकै खुसीयालीमा चकलेट
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on पार्टी एकताकै खुसीयालीमा चकलेट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठक शनिबार संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बस्यो । बैठकले नेकपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई सर्वसम्मत चयन पनि गर्यो । बैठकमा केही रोचक दृश्य पनि देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा चक्लेट मगाए र अरुलाई पनि बाँडेर आफूले पनि खाए । चकलेट बाँड्नुको कारण […]
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on ट्याब्लेट रोज्दा खोज्नुपर्ने उत्तरहरु
सानदार स्क्रिन हुने, बोक्न गाह्रो नहुने र चलाउन सजिलो हुने भएकाले ट्याब्लेट छोटो समयमै अत्यधिक लोकप्रिय भएको छ । ल्यापटपले गर्ने काम सबै नगरे पनि ट्याब्लेटले घरमा चलाइने उपकरणमा छुट्टै ठाउँ बनाएको छ । ट्याब्लेटहरु धेरैजसो पढ्न, इन्टरनेट चलाउन र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिन्छन् । कुन ट्याब्लेट किन्ने भन्ने उत्तर पाउन यी प्रश्नमा एकपल्ट विचार […]
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on इण्डक्सन कि ग्यास ? उचित कुन?
भान्साको लागि खाना पकाउनलाई चुल्हो खरिद गर्दा तपाईंसंग मुख्यतः दुईवटा विकल्प छ – इण्डक्सन र ग्यास । यी दुई चुल्हो एकआपसमा धेरै फरक छन् कि यिनीहरुमा खाना पकाउनका लागि पनि बेग्लै किसिमको भाडाहरु प्रयोग हुन्छ । यसै कारणले राम्रोसंग सोचेर र बुझेरमात्र कुनै एकमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । यी दुवैका आफ्ना आफ्नै फाइदा र […]
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on नेपालमा प्रिफ्याब घरको निर्माण
थोरै समयमा र सकेसम्म थोरै लागतमा धेरै वर्ष टिक्ने, भूकम्प प्रतिरोधी र हेर्दामा आकर्षक देखिने आदर्श घर निर्माण गर्ने चाहना हरेक सम्भावित घरधनीको हुन्छ । कयौ दशकदेखि प्रचलनमा रहेको साधारण इट्टाको प्रयोगबाट बनाइने र सिमेन्टले प्रबलित गरिने घरहरु पनि भूकम्प प्रतिरोधी, टिकाउ र आकर्षक हुन्छन । तर यस्ता घर निर्माणका तीन मुख्य बेफाइदा छन् : […]
आधारभूत सेवा पाउन घण्टौँ पैदल
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on आधारभूत सेवा पाउन घण्टौँ पैदल
खुट्टी(सिरहा)- धनगढीमाई नगरापालिका– १४ खुट्टीकी सबिता मगर(१८) ले पहिलो सन्तानलाई घरमै जन्म दिँदै थिईन। उनले पहिलो सन्तान छोरी जन्माईन। तर, साथी(साल) अड्कीयो। जसका लागि उनलाई अस्पताल नपुगी भएन। बाटो समस्याले घरसम्म एम्बुलेन्स नआउने भएपछि नवजात शिशु काखी च्यापेर उनी १ घण्टा पैदल हिडेपछि एम्बुलेन्स चढेर जिरोमाईल स्थित अस्पताल आइपुगीन। केही घण्टापछि अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि एम्बुलेन्स […]
७२ वर्षीया वृद्धाले पाइन् १९ वर्षीय किशोरमा वास्तविक माया
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on ७२ वर्षीया वृद्धाले पाइन् १९ वर्षीय किशोरमा वास्तविक माया
दक्षिण अमेरिकी राज्य टेनेसा पछिल्लो समयमा एउटा अनमेल विवाहका कारण चर्चामा छ । एक ७२ वर्षीया वृद्धाले १९ वर्षीय युवकसँग विवाह गरेपछि उनीहरू चर्चामा आएका हुन् । दुवैले वास्तविक माया अनुभूति गरेको बताएका छन् । ७२ वर्षीया अलमेन्डा इरेलाले १९ वर्षीय ग्यारी हार्डविकसँगको मायामा पागल भएको बताएकी छिन् ।उटा बर्थडे पार्टीमा उनीहरूबीच भेटघाट भएको थियो । दुई साताको डेटिङपछि उनीहरू […]
निरोगी रहने फर्मुला
May 19, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on निरोगी रहने फर्मुला
सबैको चाहना हुन्छ, निरोगी । मानिसलाई रोग लाग्यो भने पैसाको मात्र सत्यानाश हुँदैन कि जिउने आयु र दैनिक क्रियाशीलतामा पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले निरोगी रहनका लागि मानिसले अनेक विधि अपनाइरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा डाक्टरको पनि सल्लाह लिइरहेका हुन्छन् । तर, शरीरलाई रोगबाट बचाइराख्नका लागि खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यी खाद्यपदार्थ जुन […]